खुल्लामन्च: परदेशमा हामीले खेलेको भकुन्डो र संबिधान :
maile mane, bhakundo ra sambidhan ko halat ustai ustai rahechha...
Very nice, Gokuljee!
गोकुलजी, तपाईं को स्मरण र समसामयिक बिषय संग जोड्ने कला राम्रो रहेछ, पढेर आफ्नो किशोर जीवन याद आयो| "तारे होटेलहरुमा तिनका लन्च र डिनर पाक्छन्, हाम्रा बच्चाहरुको 'कुरि' छोप्ने एकसरो 'जांगे' छैन।" कुरो सहि छ|
सही कुरा !
"खेलमा नियम हुन्छ, अबधि हुन्छ । रेफ्रीको हातमा सिट्ठी हुन्छ ।"
तर यहाँ न नियम छ न अबधि, न रेफ्री । बोक्सी-झाँक्री सबै आफैं अनि त जसले जे गरे पनि भयो :)
हो यीनले नेपाली जनतालाई थाग्नामा सुताए ! हाम्रा बच्चाहरुको 'कुरि' छोप्ने एकसरो 'जांगे' छैन ! उनीहरु भने फालाफाल र मालामाल मा बसेका छन् !
खेलमा नियम हुन्छ, अबधि हुन्छ रे तर त्यो पनि उनिहरुले वाल्मत्लब दि'रा छन !
एकदम सहि कुरो गोकुल भाइ! नेता पातकीहरु न नियममा बसेर खेले, न देशको बारेमा कहिल्यै सोचे।
खेलसंग उठेको देशप्रतिको बैचारिक भाव स्मरणीय र स्वागतयोग्य छ गोकुल जी। धन्यबाद प्रस्तुतिको लागि ।
राजनैतिक विसंगतिलाइ उजागर गरेर निकै प्रतीकात्मक लेख लेख्नु भयो गोकुलजी ... साना छँदाका मिठा सम्झनाहरुले एकछिन घरतिरै तानिएँ ।
कमसेकम तपाईंको खेलमा त रेफ्री हुनेरहेछ । संविधानको भन्कुण्डो खेलमा त्यो पनि छैन । लेखले मलाई पनि पुराना दिनहरुमा पुर्यायो ।
अनि अहिले नि रेफ्री हो कि क्या हो तपाईं त?
सही उपमा दिनु भयो। रेफ्रिलाई त पाखा लगाएर खेल सुरु गरे जस्तो पो लाग्यो त मलाई यो लेख पढ्दै गर्दा र नेपालको राजनितीलाई एकै सात सम्झदा त...कता हामी बिना रेफ्रीको खेल त खेलेर यस्तो भईरहेको त हैन??
देश खाएरै सक्ने भए यी पापी मुर्दारहरुले .........